TÜLOMSAŞ Imtixaanka Qandaraaska ee Qandaraaslaha Qandaraasyada iyo Xeerka Ballamada | RayHaber | raillynews
HometareenkaTÜLOMSAŞ Agaasinka Guud ee Qandaraas-Qodobbada iyo Tilmaamaha Meel-marinta
24 / 05 / 2015 tareenka, GUUD, TURKEY
qandaraasle The General Directorate of Chartered Injineerro Imtixaanka iyo Shuruucda Ballanta: tareenka iyo Warshadaha WADIDDA AS TURKEY (TÜLOMSAŞ) XEERARKA GUUD EE DIIWAANKA EE SAAMAYNTA IYO QAABKA KOOBAN XIRIIRADA KHUDBADAHA INUU KUU SHAQEEYO Mashruuca TABABARKA QARANKA EE QARANKA
QODOBKA 1 - (1) Ujeeddada Xeerkan ayaa ah: Agaasinka guud ee TÜLOMSAŞ Mashruuca Tareenka Qaranka iyo Dhismaha ayaa ka qeybqaadan doona 399 Decree (Sharciga Wareegtada) (Maqaalka) oo ku xusan waqtiga ugu horeeya ee loo magacaabayo jagooyinka injineerka qandaraaska si loo baaro shuruudaha ugu horeeya, nooca imtixaanka gelitaanka ee la qaban doono si loo go'aamiyo habraacyada iyo mabaadiida Guddiga Imtixaanaadka.
QODOBKA 2 - (1) Xeerarkan waxaa loo xilsaari doonaa markii ugu horreysay jagooyinka injineerka qandaraas la galay ee ku xusan Xeerka Xeerka No. Waxaana ay ku aaddan.
QODOBKA 3 - (1) Xeerarkan waxaa loo diyaariyey iyada oo lagu saleynayo Qodobka 22 ee Xeerar-Sharciga 1 ee taariikhiyay 1990 / 399 / 8.
a) Maareeyaha Guud: Maareeyaha Guud ee TÜLOMSAŞ,
b) Agaasinka guud: TÜLOMSAŞ Agaasime guud,
c) Imtixaanka Galitaanka: Imtixaanku wuxuu ka kooban yahay qaybo qoraal iyo af ah oo lagu qaban doono murashaxiinta helay dhibco ku filan oo ay go'aamisay Agaasinka Guud marka loo eego natiijooyinka KPSS (B), si loo go'aamiyo kuwa loo qoondeyn doono jagada mashiinka qandaraaska sida ku xusan Xeerka Qaanuunka lambarka 399,
ç) KPSS (B): Imtixaanka Xulashada Shakhsiyadeed ee Dadweynaha oo ay qabteen Xarunta Cabbiraadda, Xulashada iyo Meelaynta (ÖSYM) ee loo qoondeeyay kooxda (B),
d) KPSSP3: Dhibcaha Imtixaanka Shaqaalaha Dadweynaha 3,
e) Guddiga Imtixaanaadka: Waxaa loola jeedaa guddiga baaritaanka injineerinka.
Mabaadi'da Imtixaanka Galitaanka Qaabka guddiga imtixaanka
QODOBKA 5 - (1) Gudiga Imtixaanaadka, oo hoos imaanaayo gudoomiye kuxigeenka Maareeyaha Guud ee loo magacaabay Maareeyaha Guud; Waxay ka kooban tahay isugeyn shan xubnood oo buuxa, oo ay ku jiraan saddex xubnood oo uu u magacaabayo Maareeyaha Guud ee ka socda Maareeyayaasha Injineerrada ama Maareeyayaasha Dhirta ee xubnaha kale, waa haddii madaxa Waaxda Shaqaalaha ay ka mid yihiin. Intaas waxaa sii dheer, afar xubnood oo baddali kara waxaa go'aaminaya Maareeyaha Guud oo ka mid ah kuwa lagu xusay sadarkaan iyo haddii ay dhacdo in xubnaha maamulayaashu aysan u xaadiri karin guddiga Imtixaanaadka sabab kasta ha noqotee, xubnaha beddelaya waa inay ka qeybgalaan Guddiga Imtixaanaadka sida ay u kala horeeyaan.
(2) Guddoomiyaha iyo xubnaha guddiga Imtixaanaadka; kama qaybqaadan karaan baaritaanka lamaanahaaga, xitaa haddii ay is fureen, ilaa heerka saddexaad (oo ay kujirto shahaadadan) iyo eheladooda ama wiilashooda ilaa heerka labaad (oo ay kujirto shahaadadan). Xaaladdan oo kale, xubnaha la beddelay ayaa la magacaabaa.
Waajibaadka guddiga baarista
QODOBKA 6 - (1) Guddiga Imtixaanaadka ayaa mas'uul ka ah go'aaminta arrimaha lagu soo dari doono ku dhawaaqista imtixaanka gelitaanka, qabashada imtixaanka, baarista diidmada iyo dhameystirka imtixaanka iyo fulinta nidaamyo kale oo la xiriira baaritaanka.
(2) Guddiga Imtixaanku wuxuu qabtaa tirada buuxda ee xubnuhu waxayna qaadataa go'aamada cod bixinta aqlabiyadda. Dhibaatooyinka looma dhigi karo inta cod bixintu socoto. Kuwa aan ku qanacsanayn go'aanka waa in ay sheegaan codkooda si ay ula socdaan sababahooda.
QODOBKA 7 - (1) Jagooyinka Injineerka ee lagu qeexay Qodobka 2 waxaa loo xilsaarayaa Imtixaanka Galitaanka. Imtixaanka gelitaanka waxaa qabta guddiga imtixaanka waqtiyada loo arko inay ku habboon yihiin agaasinka guud iyadoo loo eegayo booska banaan iyo baahida. Imtixaanka gelitaanku wuxuu ka kooban yahay imtixaan qoran iyo af ah.
(2) Gudiga Imtixaanaadka waxaa laga yaabaa, hadii ay u aragto inay munaasib tahay, in la sameeyo imtixaanka qoraalka ah oo lagu sameeyo Xarunta Qiyaasta, Xulashada iyo Meelaynta, Jaamacadaha iyo Wasaaradda Waxbarshada Qaranka ama hay'adaha kale ee dowliga ah iyo ururada ku takhasusay arimahan. Xaaladda jirta, arrimaha la xiriira baaritaanka waxaa lagu go'aamiyaa borotokoolka ay kala saxiixdeen Agaasinka Guud iyo hay'adda baaritaanka lagu qaban doono.
Ogeysiiska imtixaanka gelitaanka
QODOBKA 8 - (1) Shuruudaha kaqeybgalka Imtixaanka Galitaanka, qaabka imtixaanka, taariikhda iyo goobta imtixaanka, buundada ugu yar ee KPSSP3, goobta iyo taariikhda dalabka, nooca dalabka, dukumiintiyada lagu dalbanayo arjiga, meelaha waraaqaha codsiyada, maaddooyinka imtixaanka, tirada boosaska la qorsheeyay in lagu meeleeyo iyo tirada. arko inay muhiim u tixgelinno kale ugu yaraan shan wargeyska ugu sareeya Turkey wareegga ugu horaysay la daabacay guud ahaan la saaro faafinta rasmiga ah intii soddon maalmood ah ka hor inta laga bilaabo taariikhda baaritaanka waxaa shaacisay oo daabacay siinayo xayeysiis in ugu yaraan laba, ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in ay la posted on bogga internetka ee Waaxda Shaqaalaha State oo la Agaasinka guud ee.
Shuruudaha imtixaanka gelitaanka
QODOBKA 9 - (1) Kuwa doonaya inay galaan Imtixaanka Galitaanka waa inay buuxiyaan shuruudaha soo socda;
a) In la fuliyo shuruudaha guud ee lagu sheegay qodobka 399 ee Sharciga Xeerarka 7,
b) Inuu ka qalinjabiyo waaxyada injineernimada ee lagu cayimay ku dhawaaqida Imtixaanka Galitaanka iyadoo loo eegayo baahiyaha guud ee agaasinka guud ee kulliyadaha ama machadyada tacliinta sare ee dalka Turkiga ama dibadiisa oo loo idmaday ay ansixisay Golaha Tacliinta Sare,
c) Inaad heshay dhibcaha ugu yar ee nooca dhibcaha KPSSP3 oo aan dhicin waqtigii loo qabtay waqtiga codsiga.
Hababka dalabka imtixaanka gelitaanka
QODOBKA 10 - (1) Codsiga Imtixaanka Galitaanka waxaa lagu sameyn karaa qof ahaan ama boostada loogu soo hagaajiyaa cinwaanka ku qeexan xayeysiinta ama, haddii lagu cayimay xayeysiinta, internetka.
(2) Murashaxiinta doonaya inay galaan Imtixaanka Galitaanka ayaa ku dari dukumiintiyada soo socda foomka dalabka ee laga helayo Agaasimaha Guud ee Waaxda Shaqaalaha ama websaydhka Agaasinka Guud;
a) Nuqul asli ah ama shahaadada koobiga shahaadada ama shahaadada qalin jabinta (nuqul asal ah ama shahaadada shahaadada shahaadada isku dheelitirka ee loogu talagalay dadka waxbarashadooda dhammeeyey dibadda),
) Saddex sawir oo baasaboor.
(3) Dukumiintiyada lagu xusay sadarka 2-aad waa in loo gudbiyaa Agaasimaha Guud illaa dhamaadka maalinta shaqada. Dukumiintiyadaan waxaa oggolaan kara Waaxda Shaqaalaha ee Agaasinka Guud, iyadoo la siinayo dukumiintiyada asalka ah.
(4) Codsiyada lagu sameeyo boosta, dukumiintiyada ku taxan sadarka labaad waa in ay ku helaan Agaasinka Guud waqtiga loo cayimay ogeysiiska Imtixaanka Galitaanka. Dib u dhacyada boostada iyo codsiyada loo gudbiyo diiwaanka Agaasinka Guud kadib dhamaadka taariikhda shaqada looma tixgelin doono.
(5) Shaqooyinka iyo macaamil ganacsiyeedyada la xiriira Imtixaanka Galitaanka ee lagu bixiyay qaanuunkan waxaa fuliya Waaxda Shaqaalaha.
QODOBKA 11 - (1) Waaxda Shaqaalaha ayaa baaraysa codsiyada lagu sameeyay muddadii loogu talagalay imtixaanka waxayna go'aamisaa haddii musharraxiintu ay buuxiyeen shuruudaha. Codsiyada aan buuxin mid ka mid ah shuruudaha looga baahan yahay looma tixgelin doono.
(2) Murashaxiinta soo buuxiya shuruudaha looga baahan yahay waxaa ku hoos jira darajo laga soo bilaabo murashaxa oo leh dhibcaha ugu sarreeya ee dhibcaha KPSSP3 ee lagu caddeeyay ogeysiiska oo aan ka badnayn labaatan jeer tirada jagooyinka loo qorsheeyay in la magacaabo. Nooca dhibcaha ee KPSSP3, murashaxiinta leh isla dhibco la mid ah musharraxii ugu dambeeyay waxaa sidoo kale lagu casuumaa Imtixaanka Galitaanka. Magacyada iyo magacyada iyo meelaha imtixaanka musharraxiinta waxaa lagu shaaciyey ugu yaraan toban maalmood ka hor imtixaanka gelitaanka waxaana lagu shaaciyey websaydhka Agaasinka Guud. Intaa waxa u dheer, murashixiinta lagu soo ogeysiiyo qoraal ahaan.
(3) Dukumiintiyada laxiriira codsiyada kuwa aan buuxin shuruudaha dalabka waxaa loo dhiibaa soddon maalmood gudahood markii lagu dhawaaqo liiska magacyada qaadi kara Imtixaanka Galitaanka.
Imtixaan qoraal ah iyo mawduucyo
QODOBKA 12 - (1) Dhammaan su'aalaha qoraalka qaybta ah ee Imtixaanka Galitaanka waxaa laga diyaariyey aqoonta aqoonta xirfadeed ee lagu qeexay ku dhawaaqista imtixaanka gelitaanka.
(2) Maaddooyinka ay su'aalaha imtixaanka ka koobnaan doonaan waxaa lagu shaaciyey ogeysiiska imtixaanka. (3) Qiimaynta imtixaanka qoraalka ah waxay ku saleysan tahay boqol dhibcood oo buuxa. Si loogu guuleysto imtixaanka, ugu yaraan toddobaatan qodob ayaa loo baahan yahay.
Wac baaritaan afka ah
QODOBKA 13 - (1) Murashaxiinta iyagu dhaliya ugu yaraan toddobaatan dhibcood boqollaal qodob oo buuxa imtixaanka qoraalka ah; Magacyada musharixiinta (oo ay ku jiraan kuwa hela dhibco dhibco la mid ah musharraxii ugu dambeeyay), afar jeer tirada jagooyinka loo qorsheeyay in la magacaabo laga bilaabo natiijada ugu sareysa ee imtixaanka qoraalka ah, waxaa lagu shaacin doonaa mareegtada Agaasinka Guud iyadoo la sheegayo taariikhda iyo goobta imtixaanka afka.
QODOBKA 14 - (1) Codsadeyaasha imtixaanka afka ah;
a) Mawduucyada ku xusan ogeysiiska imtixaanka gelitaanka iyo maaddooyinka la xiriira goobta shaqada ee Agaasimaha Guud oo ay weheliso aqoon xirfadeedka goobta,
d) Awooda guud iyo heerka dhaqanka guud,
d) U-furnaanshaha horumarka sayniska iyo tikniyoolajiyada waxaa lagu qiimeeyaa iyadoo lagu saleynayo isugeyn boqol boqol ah, konton sadar (a) iyo konton xarafka (b) illaa (d). Dhibcaha uu siiyo xubin kasta oo ka mid ah Guddiga Imtixaanaadka ayaa si gaar ah loo diiwaangeliyaa oo celceliska xisaabinta ee darajooyinka ay xubnuhu bixiyaan wax ka badan boqol dhibcood oo buuxa ayaa lagu go'aamiyaa natiijada imtixaanka afka ah ee shaqaalaha. Kuwa dhaliya ugu yaraan toddobaatan boqolkiiba boqol imtixaanka afka ah waxaa loo tixgeliyaa inay guuleysteen.
Soo bandhigida natiijooyinka imtixaanka gelitaanka iyo diidmada natiijooyinka imtixaanka
QODOBKA 15 - (1) Guddiga Imtixaanaadka; afartan boqolkiiba fasalka imtixaanka qoraalka ah, soddon boqolkiiba KPSSP3 dhibcaha iyo soddon boqolkiiba fasalka imtixaanka afka; wuxuu diyaariyaa liiska guusha ee ugu dambeysa. Guddiga Imtixaanaadka ayaa go’aamiya tirada loo baahan yahay ee musharixiinta beddelka ah ee ka mid ah murashaxiinta ku baastay imtixaanka tartanka. In kasta oo darajayn lagu sameeyay liisaska asalka ah iyo kuwa beddelka ah, haddii dhibcaha imtixaanka gelitaanka ee musharrixiintu isu dhigmaan, murashaxa haysta dhibco sare wuxuu la mid yahay murashaxiinta haysta dhibco sare KPSSP3; mudnaan ayaa la siiyaa. Liiska guusha ee ay go'aamiyaan Guddiga Imtixaanaadka waxaa loo diraa Waaxda Shaqaalaha.
(2) Liiska guusha waxaa lagu shaacin doonaa boodhka ogeysiiska iyo bogga bogga Agaasinka Guud. Intaas waxaa sii dheer, murashixiinta guuleysta waxaa lagu ogeysiinayaa qoraal.
(3) Imtixaanka waxaa looga dacwoon karaa Gudiga Imtixaanka qoraal ahaan todoba maalmood gudahood markii lagu dhawaaqo natiijada baaritaanka. Rafcaannada waa in ay baaraa oo xalliyaan Guddiga Imtixaanaadka toddobo maalmood oo shaqo gudahood laga soo bilaabo dhammaadka muddada rafcaanka iyo taariikhda baaritaanka afka. Natiijada diidmada waa in loogu wargaliyaa murashaxa qoraal ahaan.
(4) Liiska guusha kama dambaysta ah waxaa shaaciyey Guddiga Imtixaanaadka toddobo maalmood oo shaqo gudahood kadib maalinta ugu dambeysa ee imtixaanka afka.
(5) Todobaatan iyo wixii ka sareeya natiijada Imtixaanka Galitaanka, kama dhigna xaq u lahaanshaha murashaxiinta aan u qalmin. Haddii tirada ardayda guuleysata ay kayar tahay tirada boosaska lagu dhawaaqay, kaliya kuwa guuleysta ayaa la aqbalayaa inay ka gudbeen imtixaanka. Kaqeybgalka liistada kaydka ahi kama dhigna inaad xaq u leedahay wixii imtixaanno ah oo ku xiga ama mudnaanta musharraxiinta.
QODOBKA 16 - (1) Natiijooyinka baaritaanka kuwa lagu helo inay sameeyeen bayaano been ah ama dukumiintiyo foomka dalabka imtixaanku waa ansax oo lama magacaabin. Waa la tirtirayaa xitaa haddii loo xilsaaray. Ma sheegan karaan wax xuquuq ah.
(2) Cabashooyinka Dambiyada waxaa loo gudbiyaa Xafiiska Xeer-ilaaliyaha Guud ee ku saabsan kuwa lagu helo inay ku been-abuurteen ama la siiyay dokumentiyo.
Ka ilaalinta dukumentiyada imtixaanka
QODOBKA 17 - (1) Dukumiintiyada la xiriira baaritaanka xubnaha la magacaabay waxay ku jiraan feylasha shaqsi ee dadka ay quseyso; Kuwa ku guuldaraysta oo aan loo magacaabi karin sabab kasta ha noqotee in kasta oo lagu guuleysto waxaa hayey Waaxda Shaqaalaha illaa imtixaanka dambe, iyadoo la siinayo inay ka yaryihiin waqtiga loo fayl garayn lahaa dacwadda.
Magacaabista iyo Ogeysiinta Meellaha Injineerka
QODOBKA 18 - (1) Dukumentiyada soo socda waxaa looga baahan yahay codsadayaasha ku guuleysta Imtixaanka Galitaanka in lagu meeleeyo jagada injineerka qandaraaska oo ku xusan Qaanuunka Sharciga 399;
a) Caddayn qoran oo ah in murashaxiinta ragga ahi aysan ku lug lahayn millatariga,
b) Lix lix sawir oo baasaboor,
c) Cadeyn qoraal ah oo ku saabsan diiwaangelinta garsoorka,
ç) Qoraal qoraal ah oo ku saabsan in Go'aanka 399 uu buuxiyo shuruudaha lagu qeexay farqadda (d) ee sadarka ugu horreeya ee Qodobka 7,
d) Baaqa badeecada,
e) Heshiis dhaqan,
f) Macluumaadka Machadka Lambarka Bulshada, haddii ay jiraan.
Balan u qaadashada booska injineerka qandaraaska
QODOBKA 19 - (1) Haddii kuwa guuleysta Imtixaanka Galitaanka ay soo gudbiyaan dukumiintiyada la codsaday, magacaabista jagooyinka injineerka qandaraaska leh ee ku xusan Xeerka Sharciga No. 399 waxaa bilaabaya Waaxda Shaqaalaha.
(2) Meelaynta kuwa aan soo gudbin dukumintiyada loo baahan yahay kama dambeysta kama dambaysta ah waa inaan la sameyn.
(3) Qodobbada laxiriira ee Xeerka Sharciga No. 399 iyo qodobbada Qodobka 657 iyo 62 ee Sharciga Shaqaalaha Rayidka ee no.
(4) Kuwa ku guuleysta Imtixaanka Galitaanka iyo kuwa aan bilaabin howlahooda iyo kuwa u tagay sababo kala duwan ayaa la magacaabi karaa muddo lix bilood ah laga bilaabo taariikhda lagu dhawaaqo natiijooyinka imtixaanka, iyagoo tixgelinaya amarka guusha ee liiska keydka imtixaanka Galitaanka.
Ogeysiinta ARTICLE 20 - (1) Macluumaadka ku saabsan murashaxiinta ku guuleysta Imtixaanka Galitaanka oo la magacaabay, waxaa lagu ogeysiin doonaa Undersecretariat of khasnadda iyo Madaxtooyada Shaqaalaha dowladda soddon maalmood gudahood iyada oo loo marayo nidaamka e-codsiga.
Waxyaabo Kala Duwan iyo Qodobbada Ugu Dambeeya
QODOBKA 21 - (1) Xaaladaha aan ku jirin qodobadani Xeerkan, Xeerka Maqaalka Xr. 399, Sharciga Nr.
QODOBKA 22 - (1) Xeerarkan wuxuu dhaqan gelayaa taariikhda daabacaddiisa.
QODOBKA 23 - (1) Qodobbada Xeerkan waxaa fuliya Maareeyaha Guud ee TÜLOMSAŞ.
Talo-bixinta Sharci ee TCDD iyo Xeer-ilaalinta Xeer-ilaalinta iyo Xeer-ilaalinta
Gaadiidka TCDD Xeerka Talo-bixinta iyo La-talinta Sharciga
Matxafka Mevlana wuxuu doonayaa inuu cagaarsho
mashaariic cusub Turkey ee ahee